The Ab Presents Nepal » नि’र्मला पन्तको ह’त्या’रा प’क्राउ गर्ने तयारी ।आखिर को होला त त्यो ?
नि’र्मला पन्तको ह’त्या’रा प’क्राउ गर्ने तयारी ।आखिर को होला त त्यो ?
काठमाडौं-: चर्चित नि’र्म’ला ह’त्या प्र’करणमा विगतमा भएका अ’नुस’न्धानमा ग’ल्ती भएको प्रहरीले स्वी’कार गरेको छ। विगतमा भएका अ’नु’सन्धानमा क’मजोरी भएको नि’ष्कर्ष निकाल्दै स’च्याएर अघि बढ्ने बताएको हो। प्रा’विधिक रुपमा भएका क’मजोरी स’च्याएर प्रहरीले अ’नुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। २०७५ साउन ११ गते कञ्चनपुर भीमदत्तनगर २ कि १३ वर्षीया नि’र्म’ला पन्तको ब’ला’त्कारपछि ह’त्या गरिएको थियो।
दी’लि’पले अचेल नि’र्म’लाको ब’लात्कार पछि आफैले ह’त्या गरेको स्वी’कार गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक भएका विभिन्न भिडियोमा उनले ह’त्या गरेको स्वी’कार गरेपछि प्रहरीले उनलाई नै अ’भियुक्त मानेको हो। यसबाहेक अन्य प्र’माण र विगतमा अ’नुसन्धानको प्रक्रियामा भएका क’मजोरी स’च्चाएर अघि ब’ढ्ने निष्कर्षमा रहेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए। दी’लिपलाई प्रहरीले प’क्राउ गर्ने तयारी गरेको छ। नि’र्म’लाकी आमा दु’र्गादेवीले समेत दी’लिप वि’रुद्ध कि’टानी जा’हेरी दिएकी छन्।तर सरकारकै स’मितिले दी’लिपलाई न’क्कली अ’भियुक्त बनाइएको भन्दै प्र’तिवेदन दिएको र त्यसमाथि त’त्कालीन समयमा अ’नुसन्धानमा रहेका प्रहरी अधिकृत ब’र्खास्त र नि’लम्ब’नमा रहेकाले के गर्ने भन्नेबारे प्रहरी अ’न्योलमा पनि छ। प्रहरीले त्यसबारे का’नुनी रा’यसमेत लिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अ’नुसन्धान ब्यू’रो ‘सी’आईबी’ अ’पराध महाशाखा, जिल्ला प्रहरीको टो’ली अ’नुसन्धानका लागि स’क्रिय छ।